TAARIIKHDA MAANTA: | DAABACADA WARKA: Oct 22, 2002
·CIIDAMADA GUMAYSIGA ITOOBIYA OO XAYIRAAD KU SOO ROGAY GANACSIGA U DHAXEEYA SHACBIGA OGAADEENYA IYO SHACABKA SOOMAALIYA:
·XISBIGA TPLF OO SII KALA DAADANAYA:
·SWEDHEN OO SAFIIR CUSUB U MAGACAWDAY ITOOBIYA:
·MADAXWAYNE ISMACIL CUMAR GEELE OO KA QAYBGALAY SHIRKA DALALKA AFKA FARANSIISKA KU HADLA:
·QARAX KA DHACAY DUGSI KU YAALA MAGAALADA ADIS_ABABA
CIIDAMADA GUMAYSIGA ITOOBIYA OO XAYIRAAD KU SOO ROGAY GANACSIGA U DHAXEEYA SHACBIGA OGAADEENYA IYO SHACABKA SOOMAALIYA:
Ciidammada gumaysiga Itoobiya ayaa billaabay inay xayiraad dhinaca ganacsiga ah ku soo rogaan shacabka Ogaadeenya, isla markaana ay joojiyaan ganacsiga ka dhexeeya dadwaynaha reer Ogaadeenya iyo kuwa Soomaaliya.
Xayiraadan, oon la garanaynin sababta ka danbeeysa, waxay u muuqataa mid lagu curyaaminayo ganacsiga u dhaxeeya Shacabka Ogaadeenya iyo midka Soomaaliyeed oo meel fiican maraya.
waxaa toddobaadyadii la soo dhaafay ay ciidamada cadawga Itoobiya la wareegeen hanti fara badan oo ay lahaayeen dad Ganacsato ah, taasoo saarrayd baabuur dhinaca Koonfurta Soomaaliya ka timid oo soo gaadhay magaalada Goday, waxayna ciidammadu hantidaas la wareegeen iyagoon bixinin sababta la wareegidda hantidaas keentay, sidaas darteed waxay dad badani rumaysan yihiin in arrintani ay tahay qayb uun ka mid ah boobkii ay ciidammada Itoobiya u gaysan jireen shacbiga Ogadenya.
Dhinaca kale ciidammada dhiigya-cabka ah ee Itoobiya waxay olole Argagax galin ah ka wadaan tuulooyin iyo deegaanada baadiyaha , kuwaasi oo dadkii ku noolaa ay si qasab ah meel isugu soo uruurinayaan, qaar ka mid ahna ay laayaan, kuwii kalana ay ku hayaan argagax gelin ay uga dan-leyihiin inay kaga dheereeyaan halganka hubaysan ee ciidammada xoryanta Ogadenya ay kaga soo horjeedaan.
Hase yeeshee ciidammada gumaysiga Itoobiya marna guul kuma gaadhaan falalka argagixisnimo ee ay shacbiga Ogadenya kula kacaan, falalka nacabka ah ee noocaas ahna uma horseedaan in shacbigu uu halganka kaga fogaado ama ay ciidammada xorayntu ku hakiyaan dhirbaaxooyinka aan naxariista lahayn ee ay la tiigsanayaan ciidammada maxaysatada ah ee Itoobiya ay Ogadenya ku soo dal-dashay.
Waxay Ciidamada wadaniga Xoreenta Ogaadeenya 12 Oktober dagal ay iskaga horyimaadeen Ciidamada Cadawga Itoobiya magaalada Farmadaw kaga dileen 5 Askari 7 kalena waa lagaga dhaawacay.
Dagaal kale oo 15 oktober 2002 ka dhacay magaalada Wiji-waaji, waxaa cadowga lagaga dilay 4askari, 3 kalana waa lagaga dhaawacay.
XISBIGA TPLF OO SII KALA DAADANAYA:
Maamulaha xaruunta xisbiga TPLF Zerai Asgedom ayaa u xaqiijiyay suxufiyiin ka socda dalal reer galbeed in xisbiga TPLF uu dhexdiisa khilaaf ka jiro, isla markaasna ay maamul xumo ka muuqato xisbiga dhexdiisa.
Zerai Asgedom waxuu si gaar ah u soo qaaday shirkado ay leeyihiin xubnaha sare ee xisbiga TPLF, oo bangiga dhexe ee Itoobiya ka qaatay daymo gaadhayo dhowr milyan oo doollarka mareykanka, kuwaasoo aan ilaa hada lacagahaas soo celinin.
Zerai waxuu intaasi ku daray in xubno badan oo ka tirsanaa xisbiga TPLF, kana howl gali jiray xaruunta xisbiga ay hadda shaqooyinkoodii ka tegeen, iyagoo dib ugu laabtay degmooyinkii ka yimaaddeen ee gobolka Tigree.
Waa markii ugu horraysay ee maamulaha xaruunta TPLF uu u waramo saxaafada, isagoo aanay ka muuqanin wax cabsi ah haba yaratee, arrintaasoo tilmaamaysa sida uu xisbigu u kala furfurmayo.
SWEDHEN OO SAFIIR CUSUB U MAGACAWDAY ITOOBIYA:
Waxaa todobaadkan si rasmi ah waraqahiisa safiirnimo ugu gudbiyay madaxweynaha Itoobiya Girma Woldegiorgis safiirka cusub ee dalka Sweden u fadhiyi doona Itoobiya Danjire Hakan Akesson, kaasoo dhawaan la kulmi doono ra'sul wasaaraha Itoobiya Melez Zenaawi.
Warar xog ogaal ah ayaa sheegayo in safiirka cusub ee dalka Sweden u magacowday Itoobiya ay dawladiisu siiyay warbixino badan oo kala duwan oo la xidhiidha jabhaddaha gobonimo doonka ah ee la dagaalamaya taliska Itoobiya.
Safiirka waxaa kaloo warbixin ballaadhan laga siiyay xaaladda xuquuqul insaanka ee Itoobiya, gaar ahaan xasuuqi ka dhacay magaalada Awasa, arrintaasoo keeni doonta in danjiruhu uu si qoddo-dheer ugu dhabbo-galo dhaqannada Itoobiya ee ku saabsan arrimaha ququuqda bani’aadamka.
MADAXWAYNE ISMACIL CUMAR GEELE OO KA QAYBGALAY SHIRKA DALALKA AFKA FARANSIISKA KU HADLA:
Madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaciil Cumar Geelle ayaa daba-yaaqadii toddobaadkii hore yimid dalka Lubnaan, si uu uga qayb galo shirwaynaha sagaalaad ee dalalka ku hadla afka Faransiiska ee loo yaqaano dalalka Farankafoonka, oo dhammaadkii toddobaadkan ka dhacay magaala madaxda Lubnaan ee Bayruut.
Madaxweyne Geelle intii uu magaalada Bayruut joogay wuxuu ka qayb galay munaasabdo kala duwan, wuxuu sidoo kale ka mid ahaa masuuliyiin lagu martiqaaday casho sharaf uu soo qabanqaabiyay guddoomiyaha Ururka Dalalka Afka faransiiska ku hadla Budrus Budrus Qaali, oo horay u soo noqday xoghaya guud ee Qaramada Midoobey.
Madaxwayne Geelle wuxuu kulan gooni ah la yeeshay xogayaha Guud ee Jamacaadda Carabta Camri Muusa, waxayna ka wada-hadleen arrimo ku saabsan nabadaynta soomaliya, gaar ahaan shirka dib u-heshisiinta soomalida ee haatan ka socda dalka Kenya.
QARAX KA DHACAY DUGSI KU YAALA MAGAALADA ADIS_ABABA:
Ciidammada booliska ee magaalada Addis-Ababa ayaa faraha kula jira baadhis ay ku wadaan qarax ka dhacay mid ka mid ah dugsiyada magaalada Addis-Ababa.
Qaraxani wuxuu subaxnimadii isniintii ka dhacay fasal ka mid ah dugsiga dhexe ee Kokebe Tsibah, waxaana halkaas ku dhaawacmay 28 arday, oo 3 ka mid ah ay xaaladdoodu khatar tahay. Booliska ayaa sheegay in qaraxaasi uu ka dhashay bambo ay ardaydu dugsiga soo geliyeen.
Fasalka waxaa qariyay dhiig ay ku dhex-maran yihiin kabihii iyo buugaagtii ardayda, sidaasna waxaa soo tebisay wakaalada wararka ee AP.
Fasalka uu qaraxu ka dhacay waxaa ku jirtay arday gaadhaysa 59 oo da’doodu ay u dhaxayso 9-10 sano. Afhayeen u hadlay booliska oo lagu magacaabo Haile Abebe ayaa sheegay in bambadan, oo ahayd kuwa gacanta lagu qaato, uu watay wiil 10 jir ah, ayna qaraxday markii ay saacadda Addis-Ababa ahayd 10:35 daqiiqo ee subaxnimadii isniinta ahayd.
CIIDAMO ITOOBIYAAN AH OO KU SUGAN MAGAALADA BAYDHABO:
Wararka naga soo gaadhayaya Magaalada muqdisho ayaan sheegaya in Ciidamo Itooboyaan ah ku suganyhiin Magalaada Baydhabo, kuwaaas oo gacan siinaya garabka Korneyl Shaar Guduud. Ciidamadaas oo hore saldhig ugu lahaan jiray Baydhabo ayaa kadib khilafkii soo kala dhexgalay masuuliyiinta RRA dib ugu soo laabtay magaalada Baydhaba.
Itoobiya ayaa mar walba ku dadaasha sidii ay isaga soo horkeeni laheed kooxaha isku haya siyasada soomaaliya, kuwas oo ay isugu dhibto hubkay ku xasuuwi lahaayeen shacabkooda.